Makà maimaimpoana 'Fahatsiarovana lehilahy manao akanjo akanjo' nataon'i Paco Roca | Famoronana an-tserasera
Paco Roca dia nahazo ny loka National Comic Award ho an'ny Wrinkles tamin'ny 2008. Ary izao dia rehefa manome antsika ny iray amin'ireo komikiny be mpividy indrindra izy hahafahanao mahafantatra ny tantarany any situ.
'Memoirs of a Pajama Man' no tantara an-tsary ao amin'ny fanontaniana ary manana izany ianao amin'ny fisintomana PDF anao rehefa mividy azy amin'ny tranokala izay zarainay etsy ambany. Fotoana tsara indrindra hahitana ity mpamorona sy mpanoratra ity miaraka amin'ny tantara an-tsary tonga lafatra mandritra ny andro.
Raha nanome an'ity tantara an-tsary ity ianao dia izay Avy amin'ny perla mandritra ny andro maro izy io noho ny fihazonana ny coronavirus manerana an'izao tontolo izao. Mitantara ny tantaran'ny lehilahy iray efa-polo taona lasa izay, nanatratra ny nofinofiny tamin'ny fahazazany: ny mijanona ao an-trano mandritra ny andro ao anaty akanjo mandry.
Toa be dia be amintsika izany zava-misy isan'andro ao an-trano ary tsy maintsy manery ny tenantsika hitandrina ny fahazarana tamin'ny fanaony taloha, satria mety ho very eo amin'ny seza mandra-pahita tontolo tsy manam-petra eo anelanelan'ny toerana, cushions, naps ary maro hafa ...
En ity fomba fiasa ity dia azo avy amin'ny fomba fijery iray amin'ny fihetsiky ny azy sy ny olon-kafa ary ho toa zavatra akaiky anao izy ireo. Asa vazivazy hanamaivanana ireo andro ireo amin'ny fomba fijerin'i Paco Roca.
Azonao atao midira amin'ny fividianana maimaim-poana avy amin'ny Astiberi.com ary araho ny PDF rehefa namorona ny kaonty ianao mba hahafahanao mividy azy. Fomba iray mahaliana hampahafantarana ny tenanao sy hitondranao ny famakian-tsainao ary ny sary kanto sy mirindra, ary manome toky anao izahay fa ho afaka hampitsiky anao noho ny. Aza mandany fotoana ary mahazo "Fahatsiarovana lehilahy manao akanjo akanjo". Aza adino izany fotoana izany endrika ambany ho an'ny famoronana ary indraindray tsy dia araka ny fahitana azy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Paco Roca dia manome ny tantara an-tsariny 'Fahatsiarovana lehilahy manao akanjo lava' amin'izao andro fitanana izao